Aplus Global Ecommerce Policy Asturnaanta Akhriso Tan
Adeegga Rafcaanka Amazon
Rafcaanka ka joojinta Amazon
Ka Hortagga Hakinta Iibiyaha Amazon
Hubinta Caafimaadka Koontada
Kordhinta Iibinta ee iibiyaasha Amazon
Qaanuunka arrimaha khaaska ah ayaa si taxaddar leh loogu sameeyay kuwa doonaya inay ogaadaan sida loogu isticmaalo "Macluumaadka Shakhsiyeed" khadka tooska ah. Macluumaadka shaqsiyeed waxaa loo isticmaalaa in lagu aqoonsado, lala xiriiro, laga helo, ama lagu aqoonsado shakhsiga ay khusayso xaaladdan.
Fadlan akhri siyaasadeena asturnaanta si aad u fahamto sida aan u ururino xogta, u isticmaalno, u ilaalino, ama u maamulno sida ku xusan degelkeena.
Macluumaadka Shakhsiyeed ee aan ururinay inta lagu gudajiray booqashada bogga ama booqashada websaydhka
Markii la buuxiyo foomka diiwaangelinta iyo La-tashiga, waxaan soo uruurineynaa macluumaadka soo socda: Magaca Martida, Cinwaanka Emailka, Lambarka Taleefanka (Ikhtiyaar), iyo faahfaahin kale oo ku xiran adeegga lagu heshiiyay.
Sideen macluumaadka u ururinaa?
Waxaan ururinaa macluumaadka booqdaha inta lagu jiro foomka Wadatashiga oo la buuxinayo, Wadahadal Toos ah, ama diiwaangelinta boggayaga.
Sideen u isticmaalnaa macluumaadka la ururiyey?
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka la ururiyey qaababka soo socda:
Si aad shaqsiyan khibrad ugu yeelato isla markaana aad u bixiso nooca waxyaabaha iyo badeecada aad jeceshahay ama aad jeceshahay mustaqbalka.
Bixi adeeg wanaagsan oo ka jawaabaya weydiintaada ama codsigaaga.
Si loo farsameeyo macaamiladaada.
Qiimeynta iyo dib u eegista adeegyada ama alaabada aan bixinno.
Si loo dabagalo kahor waraaqaha (sheekaysiga tooska ah, emaylka, ama weydiimaha taleefanka)
Sidee loo ilaaliyo macluumaadkaaga?
Uma adeegsanno iskaanka nuglaanta iyo / ama iskaanka heerarka PCI.
Waxaan bixinaa oo keliya maqaallo iyo macluumaad waligoodna ma weydiinno lambarrada kaarkaaga deynta.
Macluumaadka Shakhsiyeed ee aad wadaagtay wuxuu ka dambeeyaa shabakadaha amniga leh oo kaliya waxaa geli kara shakhsiyaadka sida gaarka ah u heli kara xogta. Waxaa nalooga baahan yahay inaan xafidno dhammaan macluumaadka aad uruuriseen. Sidoo kale, macluumaadka xasaasiga ah ee aad bixisay ayaa lagu xareeyay iyadoo la adeegsanayo SSL (Lakabka Safka Nabadeed).
Waxaan qaadaa talaabooyinka oo dhan markasta oo aad soo gasho, aad gudbiso, aad gasho wixii macluumaad ah si loo hubiyo amniga ugu badan.
Dhamaan macaamilada waxaa laga baaraandegaa bixiye gawaarida oo aan lagu keydinin ama laga baaraandegi karin server-yada.
Dhammaan lacag-bixinta waxaa lagu fuliyaa iyada oo la adeegsanayo albaab lacag-bixin oo annagu sinnaba uma awoodno ama uma jeedno inaan ku kaydinno xogta server-keena.
Miyaan isticmaalnaa 'cookies'?
Waxaan ku weydiisaneynaa rukhsad kahor intaanad soosaarin cookies. Waad dooran kartaa inaad aqbasho ama damiso dhammaan buskudka.
Waxaan codsaneynaa cookies si loo siiyo khibrad shaqsiyeed. Adigoo daminaya cookies-ka qaar ka mid ah astaamaha websaydhka ma shaqeyn karaan laakiin wali waad amri kartaa.
Shaacinta dhinac saddexaad
Annagu sinnaba ugama iibin karno, ugama ganacsan karno, uguna wareejin karno shaqsi kasta dhinac saddexaad mooyee haddii aysan u baahnayn adeegga lagu heshiiyey.
Ma bixinayno nooc kasta oo dalab ama adeeg dhinac saddexaad ah.
Shuruudaha xayeysiinta ee Google waxaa lagu soo koobi karaa mabaadiida Xayeysiinta Google. Waxaa loo diyaariyey inay u fidiyaan khibrad wanaagsan dadka isticmaala. Hubi Halkan.
Waxaan fulinnay waxyaabahan soo socda:
Dib u eegista Google AdSense
Warbixinta Google Muuqaal Sawireed
Warqadaha iyo Warbixinta xiisaha
Waxaan la soconaa iibiyeyaasha-saddexaad, sida Google waxay adeegsadaan cookies-yada koowaad (sida kuukiiska 'Google Analytics') iyo cookies-ka saddexaad (sida cookie-ka DoubleClick) ama aqoonsiyo kale oo dhinac saddexaad ah si wadajir ah loo ururiyo xogta ku saabsan isdhexgalka isticmaalaha aragtida xayeysiiska iyo shaqooyinka kale ee adeegga xayeysiiska ah sida ay ula xiriiraan degelkeenna.
Anaga iyo kuwa wax iibiya ee qeybta saddexaad waxaan kaliya u isticmaalnaa cookies-ka qeybta koowaad (falanqeyn) iyo cookies-ka saddexaad (DoubleClick Cookie) ama aqoonsiyo dhinac saddexaad ah si loo soo ururiyo xogta loogu talagalay xayeysiiska iyo howlaha kale ee la xiriira ee la xiriira degelkeena.
Xiriirkeena Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa ku jira ereyga 'Asturnaanta' waxaana si fudud looga heli karaa bogga kore.
Isticmaalayaasha ayaa heli doona ogeysiis ku saabsan isbeddelada siyaasadda asturnaanta:
On our Policy Policy ah
Isticmaalayaashu waxay awood u leeyihiin inay beddelaan macluumaadkooda shakhsiyeed:
Adoo naga soo diraya email
Waxaan u soo ururinnaa cinwaanka emaylkaaga:
Si aad u dirto macluumaad, jawaabta su'aalaha, iyo / ama codsiyo kale ama su'aalo.
Ka shaqaynta amarrada, dirista macluumaadka, iyo cusboonaysiinta amarka la xidhiidha.
Waxaan sidoo kale u adeegsanaa inaan kuu soo dirno macluumaad dheeri ah oo la xiriira adeegga lagu heshiiyay.
Suuq geyso adeegyadeenna ugu dambeeyay iyo dalabyada aan u fidinno macaamiisheenna ka dib macaamilkii asalka ahaa ee dhacay.
Haddii ay dhacdo haddii wakhti kasta oo aad rabto inaad ka baxdo emailkeena mustaqbalka ka dib noogu soo dir email info@aplusglobalecommerce.com waana kaa saareynaa dhammaan waraaqaha mustaqbalka.
Haddii ay jiraan wax su'aalo ah oo ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this aad la xidhiidhi kartaa adigoo isticmaalaya macluumaadka hoos ku qoran.
Wada sheekaysiga tooska ah: https://aplusglobalecommerce.com/
Fadlan sug 8-12 saacadood si Kooxdayada Adeegga Macaamiil ay dib kuugu soo noqdaan dhibaatada.
Adeegyada aan bixino
Ka Hortagga Hakinta
Rights Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay
Xuquuqda daabacaadda © 2021 AplusGlobalEcommerce
La hadal khabiirkeena
Aynu wada hadalno....
Haye, Sideen kuu caawin karaa?